China Emeputa na urselọ ọrụ Cope | Ngwongwo Egwuregwu Haiber
Usoro nkuzi nke akwara ntutu dị iche iche nke Haiber na-eme ka arụ ọrụ ahụ bụrụ ihe ụtọ. Ha na-agbagha mgbanwe, nguzozi na ike n'ụzọ dị egwu, ebe ha na-ahụ nchekwa kachasị na njikọta yana ọtụtụ ụkpụrụ nchekwa eurocode.
Coursedọ ụdọ anyị na-enye ọkwa siri ike dị iche iche na-amasị ma ụmụaka ma okenye. Ihe ngosi ika a dabara adaba maka ndị sonyere dị ka afọ ise.
Ọmụmụ ụdọ a haziri nke dị na Haiber na-eme ka arụ ọrụ ahụ bụrụ ihe ụtọ. Ha na-agbagha mgbanwe, nguzozi na ike n'ụzọ na-enye ọ booụ n'ụzọ na-atọ ụtọ, ebe ha na-ahụ nchekwa kachasị na njikọta yana ọtụtụ ụkpụrụ nchekwa koodu euro. Coursedọ ụdọ anyị na-enye ọkwa siri ike dị iche iche na-amasị ma ụmụaka ma okenye. Ihe ngosi ika a dabara adaba maka ndị sonyere dị ka afọ ise.
Coursesdọ ụdọ anyị na-enye ọkwa siri ike dị iche iche na-amasị ma ụmụaka ma okenye. Ihe ngosi ika a dabara adaba maka ndị sonyere dị ka afọ ise.
Enwere ike itinye usoro ụdọ anyị n'ụdị dị iche iche dị n'ime ime ụlọ. Enwere ike igbochi ha site na uko ụlọ, na-ejide onwe ha ma ọ bụ na ogidi.
Linear Belay Linear
Usoro ụdọ nke Haiber na-abịa na usoro ụdọ mbụ anyị na-aga n'ihu na - Belay - usoro nke na-enye ohere nchekwa na mfe mmegharị site na usoro ahụ. Ọ na-adigide nke ukwuu ma nwee ụgwọ mmezi dị ala. Emebere ya, wuo ya ma nwalee ya na ọkọlọtọ EN 795: 2012, ụdị D. Ọ na-esokwa usoro nyocha nke ike nke CEN / TS 16415: 213.
Line Multidirectional Belay
Mpempe belay multịirectional Ropetopia gụnyere ọtụtụ ụzọ nke na-enye ndị sonyere aka ịhọrọ ụzọ ha ga-eme na njikọta. Nke kachasị mkpa, onye na-ekewa ụzọ dị iche iche na-enye ndị ọrụ ọrụ aka ịhapụ ngwa ngwa site na ngalaba dị iche iche ma nyere ndị ọbịa aka.
Nke gara aga: Isiokwu Gburugburu-001
Osote: Mgbago Ugbo